ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း - Arcadia Camp & Outdoor Products Co., Ltd.
Arcadia Camp & Outdoor Products Co., Ltd. ကို 2005 ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Trailer Tents, Roof Tents, Awnings, Bell tents, Canvas tents, Camping Tents စသည်ဖြင့် ဒီဇိုင်းနှင့် ထုတ်လုပ်ခြင်းတွင် အထူးပြုပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည် အမေရိကန်၊ ဗြိတိန်၊ သြစတြေးလျ၊ နယူးဇီလန်၊ နော်ဝေး၊ ဥရောပ၊ အမေရိကနှင့် အရှေ့တောင်အာရှတို့ကဲ့သို့သော နိုင်ငံနှင့် ဒေသပေါင်း 30 ကျော်သို့ တင်ပို့ထားသည်။စသည်တို့
နှစ် 20 နီးပါးစဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုပြီးနောက်၊ Arcadia Camp & Outdoor Products Co., Ltd. သည် "Arcadia" ပြင်ပအမှတ်တံဆိပ်ကိုပိုင်ဆိုင်သည့် တရုတ်နိုင်ငံတွင် ထိပ်တန်းတဲထုတ်လုပ်သူဖြစ်လာခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ 8 လူနည်းပညာအဖွဲ့နှင့်အတူ၊ OEM နှင့် ODM အမိန့်များကိုကြိုဆိုပါသည်၊ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ပုံဆွဲ၊ နမူနာအဖြစ်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ထို့အပြင်၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် အရောင်းဝန်ထမ်း (၆)ဦး၊ အရောင်းဝန်ထမ်း (၂)ဦးနှင့် ပို့ဆောင်ရေးနှင့် စာရွက်စာတမ်းများကို စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးသော အရောင်းဝန်ထမ်း (၂)ဦးတို့နှင့်အတူ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အရောင်းအဖွဲ့လည်း ရှိပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်၊ အချိန်မီနှင့် အပြုသဘောဆောင်သော ဝန်ဆောင်မှုများပေးဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။
ပစ္စည်း ဝယ်ယူခြင်း မှ အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်ခြင်း .အမှာစာ ပြီးသောအခါ ၊ ပစ္စည်း တစ်ခုစီ ကို တပ်ဆင် ပြီး ပို့ဆောင်မှု မပြုမီ လူတိုင်း အရည်အသွေး ကောင်းမွန် ကြောင်း သေချာ စေရန် .
Trailer Tent : ကြမ်းခင်းပျော့ (7 ပေ ၊9ပေ ၊ 12 ပေ ) ၊ ကြမ်းပြင် ( နောက် ခြံ ၊ ရှေ့ ခြံ )
Roof Top Tent - အမိုးပျော့တဲ၊ Hard Shell Roof Top Tent၊ Awnings
ဘဲလ်တဲ-3မီတာ၊4မီတာ၊5မီတာ၊6မီတာ၊7မီတာ
ငါးမျှားတဲ : အလွှာတစ်ခု၊ အပူပုံစံ
Swag: Single Swag၊Double Swag
1. ကျွန်ုပ်တို့တွင် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နည်းပညာအဖွဲ့တစ်ခုရှိပြီး နမူနာများနှင့် ပုံများကို စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
2. ကျွမ်းကျင်လုပ်သား 80 ကျော်ရှိသော ကိုယ်ပိုင်စက်ရုံ၊
3. 100% အရည်အချင်းပြည့်မီကြောင်းသေချာစေရန် တင်းကျပ်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစစ်ဆေးခြင်း။
4. အမျိုးမျိုးသောအထည်ပစ္စည်းများသည် မတူညီသောဖောက်သည်များ၏စျေးနှုန်းနှင့် အရည်အသွေးလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီပါသည်။
6. 12 နာရီအတွင်း အကြောင်းပြန်နိုင်သည်။